I-Qingli/I-East Lake Cherry Blossoms/Iyafumaneka ukuba iqeshwe ixesha elide nelifutshane/Izixhobo Zekhaya Eziphucukileyo Iprojekta Ibhedi/Ukuhamba imizuzu eyi-1 ukuya kwindawo engaphantsi komhlaba/Indawo Entle Yase-East Lake/Imyuziyam Yephondo - I-Airbnb
I-Qingli/I-East Lake Cherry Blossoms/Iyafumaneka ukuba iqeshwe ixesha elide nelifutshane/Izixhobo Zekhaya Eziphucukileyo Iprojekta Ibhedi/Ukuhamba imizuzu eyi-1 ukuya kwindawo engaphantsi komhlaba/Indawo Entle Yase-East Lake/Imyuziyam Yephondo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu清居·贰
Uyilo lwesitayela sale ndlu lukhupha inkululeko kunye nokuzola. Iifestile ezisuka kumgangatho ukuya kwisilingi zivumela ukukhanya kwelanga kungene. Buyela umva ngexesha kwaye ucothise ubomi bakho apha, kwaye wonwabele imvakalelo yokuza eJiangcheng kwiholide kwindawo epholileyo nepholileyo. Kuphela xa umoya ukhululekile kwaye wonwabile apho abantu banokuyonwabela ngokupheleleyo imbali, uluntu, ukutya kunye nobomi apha.
Igumbi linegumbi elinye elinezikwere zeemitha ezingama-55 kunye nekhitshi epheleleyo kunye nezixhobo zokuhlambela.
I-1.8 * 2 ibhedi ephindwe kabini ingahlala abantu aba-2.
Izixhobo zombane: iiprojekti zenethiwekhi (izikrini eziqikelelwayo), iifriji, ii-air conditioners (zombini ezibandayo kunye nezifudumeleyo), izomisi zeenwele, izifudumezi zamanzi, oomatshini bokuhlamba kunye nezinye izixhobo.
Ibhalkhoni: Ibalcony yokuhlala, apho iimpahla zinokomiswa khona.
Iimfuno zemihla ngemihla: iitawuli zokuhlambela, intlama yamazinyo, iibrashi zamazinyo, ishampu, ijeli yeshawa, isepha yesandla, islippers (akukho kulahlwayo), njl.
Igumbi ligumbi lokulala elinye eliziimitha eziyi-55 square, elinekhitshi negumbi lokuhlambela elinento yonke.
Ibhedi elala abantu ababini eyi-1.8 * 2 inokuhlala abantu abayi-2.
】zombane: iprojekta edityanisiweyo (iskrini seprojekthi), ifriji, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu (zombini ezifudumezayo nokupholisa), isixhobo sokomisa iinwele, into yokufudumeza amanzi, umatshini wokuhlamba impahla nezinye izinto.
Ibhalkhoni: Ibhalkhoni yokuhlala, ungazomisa iimpahla zakho.
Izinto eziyimfuneko zemihla ngemihla: itawuli yokuhlamba, intlama yokuhlamba amazinyo, ibrashi yamazinyo, ishampu yeenwele, into yokucoca umzimba, isepha yezandla, ii-slippers (azilahlwayo), njl.
Hamba umgama oziimitha ezingama-200 ukuya kwisikhululo sikaloliwe esingaphantsi komhlaba sikaLine 4 [iSikhululo saseDongting], kunokuthiwa sakhiwe kwindlela engaphantsi komhlaba~
-Hamba imizuzu emi-3 ukuya eDongting Phuma kumgca wesi-4
-Imizuzu eyi-10 ngololiwe ohamba ngaphantsi komhlaba; Isitalato iChuhe Han
-Imizuzu engama-20 nge-subway; IYunivesithi yaseWuhan
-Imizuzu engama-25 nge-subway; Indlela yeJianghan
-Imizuzu engama-20 ngololiwe ohamba ngaphantsi;
-Imizuzu engama-20 ngololiwe ohamba ngaphantsi komhlaba, iMyuziyam yePhondo/iPolar Ocean World
-Imizuzu eli-15 ngemoto ukusuka kwisikhululo sikaloliwe saseWuhan / kwisikhululo sikaloliwe esikhawulezayo; imizuzu engama-25 ngololiwe ohamba ngaphantsi komhlaba
-Imizuzu engama-25 ngemoto ukusuka kwisikhululo sikaloliwe saseHankou / kwisikhululo sikaloliwe esikhawulezayo; imizuzu engama-44 ngololiwe ohamba ngaphantsi komhlaba
-Imizuzu engama-25 ngemoto ukusuka kwisikhululo sikaloliwe iWuchang / Isikhululo sikaloliwe esinesantya esiphezulu; imizuzu engama-20 ngololiwe ohamba ngaphantsi komhlaba
-Imizuzu engama-50 ngemoto ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iTianhe; Iyure e-1 kunye nemizuzu eyi-15 ngololiwe ohamba ngaphantsi komhlaba
Umbuki zindwendwe ngu- 清居·贰
Wamkelekile ukuhlala ~ Nokuba kukuhamba, uhambo lweshishini, umsebenzi, okanye ithemba lokufunda ngeli xesha, kunokukuzisela obona bomi bukhululekileyo, khulula ukudinwa ~ Ukuba unemibuzo ngexesha lokuhlala kwakho, nceda unditsalele umnxeba. nangaliphi na ixesha~
Wamkelekile ukuhlala ~ Nokuba kukuhamba, uhambo lweshishini, umsebenzi, okanye ithemba lokufunda ngeli xesha, kunokukuzisela obona bomi bukhululekileyo, khulula ukudinwa ~ Ukuba un…